Miravaka ny toe-panahy maha-te ho tia avy amin’Andriamanitra
"Zavatra iray Ioha no nangatahiko Jehovah, izany no hotadiaviko, dia ny hitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin 'ny andro rehetra hiainako,mba ho faly mijey ny fahasoavan Jehovah sy mandinika ny tempoliny." — Sal. 27:4.
Azon'ny tsirairay raisina ny hery avy any ambony. Eo ambanin'ny fiahian' Andriamanitra dia azon'ny olona atao ny hanana saina tsy misy faharatsiana, voamasina sy voasandratra. Amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Kristy, ny fisainan'ny olona dia afaka ho tia sy manandratra an'ilay Andriamanitra Mpahary.
[---] Fanirian'Andriamanitra ny hahatonga ny ankizy ho mahafatifaty, tsy amin'ny alalan'ny firavahana ivelany, fa avy amin'ny fahatsaran-toetra, ny hakanton'ny fahalemem-panahy sy fitiavana, izay hahatonga ny fon'izy ireo ho voahodidin'ny fifaliana sy fahasambarana. - ST, 6 Desambra 1877.
Ny zazavavy dia tokony hampianarina fa ny tena fahatsarana ho an'ny vehivavy dia tsy ny endrika ivelany ihany na ny fahavitan-javatra, fa ny fanahy tony, manam-paharetana, ny fahalalahan-tanana, ny fahamoram-panahy sy ny fahavononana hiasa sy hiaritra ho an'ny hafa. Tokony hampianarina hiasa izy ireo, hianatra ao anatin'ny fikendrena tanjona, hanana tanjona kendrena eo amin'ny fiainana, hatoky an'Andriamanitra sy hatahotra Azy, ary hanaja ny ray aman-dreniny. Amin'izany, rehefa mitombo taona izy ireo, dia hitombo amin'ny fahadiovan-tsaina, ny fahatokian-tena sy ny toetra maha-te ho tia. Tsy ho azo ambanina ny vehivavy toy izany. Ho afaka amin'ireo fakam-panahy sy fizahan-toetra izay nanapotika olona maro izy. — CG, 140.
Nirahina i Kristy mba ho môdely ho antsika, ka moa tsy hasehontsika va fa manana ny fitiavany sy ny halemem-panahiny ary ny hatsarany isika?[...] — Ms 7,1888